Honduras GST | Maxaan samayn karaa haddii aan TPS waxaa dhacayo? | USAHello
TPS Honduras - waxa aad sameyn karto marka aad TPS dhacayo?
Halkan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan TPS dadka ka Honduras.
Photo: iyadoo Belinda Osorio Hanzman
Honduras GST – marka ma aan TPS dhacayo?
Ilaa uu jiro go'aan, si aad ula socodsiisid kartaa dhammaan macluumaadka cusub. Waxaad baran karo oo ku saabsan fursadaha aad haddii TPS dhacayo, iyo naftaada iyo qoyskaaga aad isugu diyaariso tallaabada xigta.
Kooxda heysata TPS dalban kartaa aqoonsi-doonka, gaar ahaan haddii ay halkan sano ah ama ka yar. Haddii aad halkaan joogaa muddo sannad ka yar a, waa in aad DALBADO NOW. Si kastaba ha ahaatee, waxaa aad u muhiim ah in aad ogtahay USCIS ayaa dhawaan bedelay sida codsiyada magangelyo waxaa la. Hadda, waxay dib u codsiyada ugu dambeeyey horeysay. aad hal mar soo gudbiyaan codsi magangelyo, waxaa laga yaabaa in wakhti aad u yar ka hor inta uusan kiiskaaga la maqlay. Sidaas, aad ugu keliya dalbato magangalyo haddii aadan u qalmi maxaa yeelay, haddii kale waxaad halis kiiskaaga maqlay ka dibna la soo tarxiilay. Halkan waxaa ah foomka si aad u dalbato magangelyo (tani waa qaab sharci ah iyo waxa ay noqon fiican lahayd haddii aad qareen kaa caawinaya in aad buuxiso foomka).
Sida loola xidhiidho safaarada Honduras ee USA
Your safaaradda boostada laga yaabaa in macluumaad cusub oo ku saabsan TPS. Waxaad ka heli kartaa website aad ee dalka Maraykanka safaarada halkan.
Cinwaanka safaarada waa 3007 Tilden St NW, Washington, DC 20008.
lambarka taleefanka waa:(202) 966-7702.
Halkan waxaa ku qoran link a si ay u tayuu bogga safaaradda ee ku saabsan TPS.
The Safaarada Honduras ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay qunsuliyadaha magaalooyinka kale. Halkan waxaa ah liiska qunsuliyadaha.